တိုကျိုမြို့ ရထားပေါ်တွင် ဓားဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦး ဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရထားပေါ်တွင် ဓားကိုင်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားသဖြင့် လူများ ရထားပေါ်မှ အလုအယက် ဆင်းပြေးနေကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
တိုကျို ၊ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် ညပိုင်းတွင် Keio ရထားလမ်းကြောင်းပေါ်၌ အမျိုးသားတစ်ဦးက ဓားဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၁၅ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ကျိုဒိုသတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာရသူများထဲတွင် အသက် ၆၀ ကျော် လူကြီးတစ်ဦးလည်း ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရထားသလို သတိလစ်မေ့မြောနေကြောင်း သိရသည်။
အာဏာပိုင်များက သံသယတရားခံကို ချက်ချင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ကြောင်း ၊ ဒေသစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဓားဖြင့် ရမ်းကားတိုက်ခိုက်နေသည်ဆိုသည့် သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်ခံရရှိပြီးနောက် ဓားကိုင်တိုက်ခိုက်သူ အသက် ၂၀ နှစ်ကျော် အရွယ် အမျိုးသားကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးကာ အချုပ်ခန်းထဲ ထည့်ထားကြောင်း သိရသည်။
သံသယတရားခံကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လူသတ်ရန် ကြံရွယ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် သူ့အား စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု နှင့် အခင်းဖြစ်အကြောင်းအရာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ပြောကြားချက်ရ သံသယရှိသူသည် ဆီကဲ့သို့သော အရည်တစ်မျိုးကို အသုံးပြုကာ ရထားပေါ်တွင် မီးရှို့ခဲ့ရာ ယင်းရထား၏ ငါးတွဲမြောက်တွင် မီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းရထားပေါ်တွင် ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်စစ် ပြန့်ကျဲနေသည်ဆိုသည့် သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်ခံရရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းအက်စစ်အား အသုံးပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုထားသည်။
အဆိုပါ ဓားကိုင်တိုက်ခိုက်မှုသည် တိုကျိုမြို့လယ်ခေါင်ရှိ Shinjuk တွင်ပြေးဆွဲနေသည့် အတွဲ ဆယ်တွဲပါ ရထားတစ်စင်းပေါ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မီး နှင့် မီးခိုးလုံးများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ခရီးသည်များအကြား အထိတ်တလန့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ထွက်ပြေးမှုများ ဖြစ်ပွားပေါ်ခဲ့ရသည်။
မီး နဲ့ မီးခိုးလုံးများ ထွက်ပေါ်နေသည်ကို ရထားတွဲပေါ်ရှိ လူအချို့ထံမှ ဟစ်အော် သတိပေးမှုထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ လူများမှာ ရထားတွဲအပြင်သို့ ထွက်နိုင်ရန် တံခါးဘောင်များကို ကျော်၍ အလုအယက် ထွက်ပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရထားသည် အမြန်ရထားများအတွက် မူလက ရပ်တံ့ရန် မဟုတ်သော ဘူတာရုံတစ်ခုတွင် အရေးပေါ်ရပ်တံ့ခဲ့ရပြီး လူများသည် ဘေးလွတ်ရာသို့ သွား၍ ယာယီခိုလှုံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
TOKYO, Oct. 31 (Xinhua) — Fifteen people were reported injured in Japan’s Tokyo byaman wieldingaknife onaKeio Line train on Sunday night, according to Kyodo reports.
Among the injured,aman in his 60s was seriously hurt and unconscious.
The authorities immediately took the suspect,aman in his 20s carryingaknife, into custody after the police receivedareport about the knife-wielding man around 8 p.m. local time.
The police arrested the suspect for attempted murder, and are currently investigating the incident and questioning the suspect.
According to the police, the suspect also used an oil-like liquid to set fire in the train, burning part of the fifth carriage of the train.
The police also receivedareport that hydrochloric acid was spread on the train, but later denied that the acid was used.
The incident took place ona10-car train bound for Shinjuku in central Tokyo and caused panic among passengers amid the fire and smoke.
Screaming of several people was heard from the carriage where smoke and fire came, with people climbing through the windows to get out of the train.
After the incident, the train stopped atastation that is not originally planned for the fast train, where people temporarily got off for shelter. Enditem